जिल्लामा औसत २०० डोजर - Naya Patrika
जिल्लामा औसत २०० डोजर
काठमाडाैं | असोज २५, २०७५
देशभर १४ हजार डोजर बाटो खन्दै, जनप्रतिनिधि आफैँ र नातागोता डोजरमालिक
स्थानीय विकासका नाममा तराईका फाँटदेखि पहाडका पाखासम्म डोजर कुदाइएका छन् । नयाँ पत्रिकाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार देशभर अहिले १३ हजार ६ सय ६६ डोजर सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले एक जिल्लामा औसतमा एक सय ७७ डोजरले बाटो खनिरहेका छन् ।
अध्ययनविना र डोजर अपरेटरको ‘इन्जिनियरिङ’मा खनिएका सडकले विकासभन्दा विनाश निम्त्याएका छन् । तर, आफैँ र नातागोताले सञ्चालन गरेका डोजरले जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत फाइदा भइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि उदयपुरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै डोजर किनेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । बेलका नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष वसन्त मगरले आफ्नो डोजर नगरलाई भाडामा लगाएका छन् । नगरपालिकाकै अर्को डोजरले पनि काम गरिरहेको छ।
रौतामाई गाउँपालिकामा पनि वडा नं. २ का अध्यक्ष खविन्द्र राजकोटीको एउटा र वडा १ का अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काका आफन्तको एउटा गरी दुई डोजर चलाइएका छन्। कटारी नगरपालिकामा पनि वडा नं. ९ का अध्यक्ष वेगबहादुर आले र वडा नंं. ११ का अध्यक्ष सरोज बुढा क्षेत्रीले डोजर किनेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकामा २, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा २ र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा ३ वटा डोजर सञ्चालित छन् ।
आफ्नै डोजर किन्दै ताप्लेजुङका पाँच तह
हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङका नौ स्थानीय तहमा डोजर प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । फुङलिङ नगरपालिकासँग दुई वर्षअघि खरिद गरेको आफ्नै स्काभेटर छ । अरू आठ तह पनि आफ्नै डोजर तथा स्काभेटर खरिद गर्ने योजनामा छन् ।
मेरिङदेन, पाथीभरा, याङवरक, मैवाखोला र सिदिङ गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमै डोजर खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेका छन् । उनीहरूले अहिले पनि ठेकेदार कम्पनीका डोजर प्रयोग गरिरहेका छन् । जिल्लामा १० वटा ठेकेदार कम्पनीसँग ५० को संख्यामा डोजर/स्काभेटर छन्।
प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिकामा २० डोजर चल्दै
प्युठानको झिम्रुक गाउँपालिकामा पुराना बाटोको स्तरोन्नति गर्न भन्दै २० वटा डोजर एकसाथ चलाइएका छन् । नौवटा स्थानीय तह रहेको प्युठानमा ७ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । प्युठान नगरपालिकामा ६ वटा डोजरले काम गरिरहेका छन् । यो नगरपालिकाभित्र १० वटा डोजर छन् ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा ९, मल्लरानी गाउँपालिकामा ८, गौमुखी गाउँपालिकामा ६, ऐरावती गाउँपालिकामा ५, नौबहिनी गाउँपालिकामा ६, सरुमारानी र माण्डवी गाउँपालिकामा १–१ डोजर छन् । यी सबै व्यवसायीका निजी डोजर हुन् । स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार व्यवसायीकै डोजर भाडामा लिएर सडक खन्नेलगायत काम गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै कालिकोटका नौवटै स्थानीय तहले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेर पाखापाखामा डोजर चलाइरहेका छन् । गाउँमा डोजरले पाखा भत्काइरहँदा स्थानीय युवा भने रोजगारीका लागि भारततर्फ भासिएका छन् ।
जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले खुलालुदेखि लालुसम्म ३ करोडको सडक निर्माण गर्न दुईवटा डोजरको प्रयोग गरिरहेको छ । लालिघाट हुँदै कुमालगाउँ सडकखण्डमा २ वटा डोजर चलाइएका छन् । यसमा पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाले दुईवटा सडक निर्माण मा ३ वटा डोजर चलाइरहेको छ, यसकालागि ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
शुभकालिका गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि ४ वटा डोजर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बजेट ५ करोड छुट्याएको छ । तिलागुफा नगरपालिकाले वडावडामा सडक पु¥याउन भन्दै ४ वटा डोजर लगाएर पाखापखेरा भत्काइरहेको छ, यसकालागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रास्कोट नगरपालिकाले एक करोड खर्चेले आफ्नै डोजर किनेर प्रयोगमा ल्याएको छ । पलाता गाउँपालिकाले आन्तरिक सडक निर्माणका लागि ३ करोड बजेट बिनियोजन गरेर २ वटा डोजर चलाइरहेको छ । महावै गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा ६ करोड छुट्याएर ४ वटा डोजर प्रयोगमा ल्याएको छ । पचालझरना गाउँपालिकाले डोजर प्रयोगका लागि ५ करोड र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ९ करोड छुट्याएर काम गरिरहेका छन् ।
धनकुटाको एउटै नगरपालिकामा १० डोजर चलाइदै
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा १० डोजरले काम गरिरहेका छन् । पाख्रीवास नगरपालिकामा एउटा भ्याकु लोडर प्रयोग भइरहेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिकामा ७, छथर–जोरपाटी गाउँपालिका र साँगुरिगढी गाउँपालिकामा २/२ तथा चौबिसे गाउँपालिकामा एउटा डोजर सञ्चालित छ । सबै तहका एक–एक डोजर आफ्नै छन् । धनकुटा नगरपालिकामा मात्रै डोजर चलाइएको छैन ।
#जिल्लामा औसत २०० डोजर
मुलुकको समृद्धिका लागि अभियान जरुरी : प्रचण्ड
सरकारद्वारा सिफारिस राजदुतको नाम अनुमोदित
स्वास्थ्य सचिवमा अधिकारी
मिस वर्ल्ड २०१८ को ताज मेक्सिकाेलाई